Imifanekiso engamanyala ichaphazela impilo-iSiseko soMvuzo
Ikhaya Iphonografi ithinta impilo
Iingcali zokhathalelo lwempilo zinika ingxelo yokunyuka okukhulu kwamanqanaba okuphazamiseka kwengqondo kunye neuro-ukukhula kwengqondo kubantu abancinci namhlanje. Abantu abadala abaninzi baneengxaki zempilo yesondo nabo. Ngaba kuyinyani ukuba iphonografi iyayichaphazela impilo? Amanqaku ophando kwimpembelelo yokusetyenziswa okunyanzelekileyo kwe-intanethi ye-intanethi kwimpilo yengqondo. Ezi meko zichaphazela ngokukodwa amadoda. A Uhlolo lwe-2015 Love et al. ithi
Iindaba ezimnandi zezokuba ukubuyela kwimeko yesiqhelo kunokwenzeka. Kuyanceda ukuba uyayiqonda indlela ingqondo etshintsha ngayo xa usiva izinto ezahlukeneyo ebomini bakho.
Kweli candelo Isiseko soMvuzo sazisa ngeendlela ezininzi ezinokuthi zichaphazele impilo yethu ngokusetyenziswa kwe-intanethi. Sigxila kwi-intanethi ye-intanethi.
Ukusetyenziswa kwe-intanethi kwi-intanethi kunokutshintsha ingqondo kunye nokuguqula umzimba womntu. Inokukhokelela abantu ekubeni bahlakulele ingxaki yokuziphatha ngokwesondo kubandakanya umlutha. Ngokulula, iphonografi iyayichaphazela impilo. Sikhupha le micimbi kula maphepha alandelayo.